Jorgen Klopp oo ka hadlay guushii xalay iyo Allison oo dib u helay bandhig qurxoon. Horyaalka Ingiriiska
Home Horyaalka Ingiriiska Jorgen Klopp oo ka hadlay guushii xalay iyo Allison oo dib u...
Jorgen Klopp oo ka hadlay guushii xalay iyo Allison oo dib u helay bandhig qurxoon.
Alisson ayaa dhawaan dab qabadsiiyay laakiin si fiican ayuu u seexan doonaa ”sida uu sheegay macalinka Liverpool Jurgen Klopp ka dib markii uu shabaqa ilaashaday kulankii xalay ee ay 2-0 kaga badiyeen RB Leipzig.
Goolashii ee ay dhaliyeen Mohamed Salah iyo Sadio Mane ayaa ka dhigtay Reds in lugta la sii galaan wareega sideeda Champions League iyo guushii ugu dambeysay ee ay ka gaaraan Budapest, ka hor lugta soo laabashada ee Liverpool 10-ka Maarso.
Si kastaba ha noqotee, ka hor yoolalkaas Alisson wuxuu la yimid badbaadin weyn daqiiqadii 46aad si uu u diido Christopher Nkunku uu ka dhaliyo fursad qaali ah uu ku helay
Bandhig fiican ayuu la yimid Allison waxaana uu ka baxay shabaqiisa oo nadiif ah goolhayaha reer Brazil ayaa lagu dhaleeceeyay inuu u soo baxay guuldaradii 4-1 ee ka soo gaartay kooxda Manchester City iyo isku darkii daafaca ee guuldaradii 3-1 ee ka soo gaartay Leicester City ciyaarihii Premier League.
Xaqiiqdii, xaqiiqdii ayuu Klopp yiri markii wax laga weydiiyay Alisson inuu dareemayo wanaag Wuxuu si daacad ah u soo qaatay daqiiqado waa weyn ciyaarta Leicester sidoo kale, badbaado cajiib ah Marka waa sidaas laakiin dabcan way caawinaysaa.
Xaashi nadiif ah, waxaan qiyaasi karaa in Ali uu si fiican ugu seexan doono diyaaradda inta uu guriga ku sii jeedo iyo sidii had iyo jeer uu wax badan noo caawiyay.
Guushii Liverpool ayaa dhalisay seddex guuldaro oo isku xigta xilli ay rabshado ka dhex jireen kooxda Klopp madaama horyaalkoodii Premier League uu hoos u dhacay, isagoo hoos ugu dhacay kaalinta lixaad.
Tababaraha Jarmalka ayaa ku faraxsan jawaabta ciyaartoydiisa ee ka dhanka ah semi-finalka Champions League xilli ciyaareedkii hore, taasoo keentay niyad wanaag inkastoo uu ku adkeystay inaysan taasi aheyn wax ku dhaca dhibaatooyinkooda.
Fiiri ma nihin caruur sidaa darteed waxaan hadda ku fikiri karnaa ‘ok, hadda waxaan ku guuleysanay ciyaartaas wax walbana waa hagaagsan yihiin mar labaad ayuu yiri Klopp.
Aniga ahaan waxaa aad uga muhimsan inaan mar kale ciyaarnay kubad wanaagsan Mar labaad, maahan markii ugu horreysay, dhowrkii toddobaad ee la soo dhaafay, waan fahamsanahay taas waxaanan ixtiraamayaa boqolkiiba 100, in qofna uusan runtii ku faraxsaneyn natiijooyinka taasi waa iska cadahay.
Digniinta Klopp waa mid la fahmi karo marka loo fiiriyo qaab ciyaareedkii bishii hore ee la joojiyay ka dib guushii ay ka gaareen Tottenham iyo West Ham ka hor inta aysan dhicin.
Wuxuu intaas raaciyay: “Si fiican ayaan u aqaanaa Leipzig waana ogahay sida ay u noqon karaan kuwa ugu awooda badan, kubada cagta, iyo sida ay uga badin karaan ciyaarta marka loo eego aragtida jirka.
Taasi waa waxa aan la macaamilnay caawa oo wiilashu waxay ciyaareen ciyaar aad u wanaagsan, ciyaar aad u wanaagsan ayuu hadalkiisa kusoo afmeeray.
Previous articleAndre Pirlo oo kahadalay Xidiga Reer portugal ee Ronaldo ka hor kulanka caawa
Next articleRonald Koeman oo ka hadlay xasuuqii loogu geystay gurigooda xilli uu amaan kala duldhacay Mbappe.